Afaka firy taona vao lasa mpitaingina bisikileta? - Mpitaingina Bisikilety
Tena > Mpitaingina Bisikilety > Ahoana no fomba hahatongavanao amin'ny bisikileta mpomba anao - famaliana ireo fanontaniana
Ahoana no fomba hahatongavanao amin'ny bisikileta mpomba anao - famaliana ireo fanontaniana
Afaka firy taona vao lasa mpitaingina bisikileta?
Tena fanandramana mahery vaika ny mandalo ity programa ity ary niaiky i Miller, 'ItMilafito tsarataonamampivelatra ampitainginaaHO AN'NYfitetezam-paritrampitaingina. '
Ny Tour de France dia mety ho iray taona aorianay, saingy zavatra iray azo ianteherana hitazomana anao ho orinasa dia ny manontany amin'ny GCNything. Naka fanamarihana avy tamin'i Si sy Dan tamin'ny nomerao tamin'ny herinandro lasa aho, ary hampiditra afo haingana kokoa fotsiny aho, satria fotsiny hoe maro aminareo no manokana fotoana hifandraisana aminareo. Averinay ilay fankasitrahana ary mamaly fanontaniana vitsivitsy hafa.
Saingy aloha misy ity fanontaniana lava valiny avy amin'i Joshua Pearce ity, izay nanontany hoe: 'Hashtag TorqueBack ahoana no hahatongavako ho bisikileta matihanina' na mitaingina ekipa aho? 'Ka, voalohany indrindra, misaotra anao nifandray taminay, Joshua. Amin'ny ankapobeny, ny hany tokony hataonao dia ny bisikileta voalohany sy lehibe indrindra no ankafizin'ny vondrona mpitaingina mitovy fihevitra eo an-toerana, saingy mieritreritra aho fa te-hiditra amin'ny ekipa bisikileta na klioba eo an-toerana ianao. Ary manome anao fahaizana mitaingina miaraka amin'ilay vondrona izy ireo, iray amin'ireo fahaiza-manao tena ilaina raha te hieritreritra momba ny hazakazaka mihitsy ianao, ary avy eo mila miditra amin'ny hazakazaka sasany ianao ary amin'ny taonanao, amin'ny 16 taona, dia hisaraka ianao avy amin'ny fisedrana ara-potoana Afaka misafidy ny hitondra ny ankamaroan'ny hazakazaka amin'ny faritra mihidy ianao.
Ary avy eo, raha tena te-handray pro ianao dia mila manao hazakazaka tsara amin'ireo hazakazaka ireo ary manatanjaka ny tenanao, mifantoha, miala sasatra betsaka, alao antoka fa mbola afaka mankafy bisikileta ianao fa manatsara ny asa tanana, manatsara ny fahaizanao ary bebe kokoa mampiharihary karazana hazakazaka isan-karazany. Ary raha ny tena izy, hevitra tsara ny mandeha bisikileta an-tendrombohitra koa, angamba mandeha bisikileta kely mba hahay hatraiza hatraiza, ary amin'ny ankapobeny dia amin'ny taonan'ny zandry sy latsaky ny 23 taona no mila manatsara hatrany ary raha afaka ny ho pro ianao mila mandresy hazakazaka vitsivitsy, ary rehefa manomboka mandresy hazakazaka eo amin'ny sehatra nasionaly ianao, dia raisin'ny ekipam-pirenena avy eo ary entina amin'ny ambaratonga manaraka dia ny fifaninanana iraisam-pirenena amin'ireo hazakazaka lehibe kokoa ary eo izany rehefa tsara ianao ampy raha mandresy, ohatra, dia hisarika ny sain'ny mpitantana ekipa matihanina. Fa miasa mafy, miala sasatra be ary mankafy mandeha bisikileta.
Ary ho fanampin'izany, ahoana ity lahatsoratra ity? - Aza manahy raha tsy manana fitaovana tsara indrindra ianao. Fantatro izao fa maro amintsika, maro amintsika aza, mijery sy maniry fatratra bisikileta lafo dia ampahany amin'ny bisikileta, fa raha tsy manana bisikileta lafo ianao dia aza manahy fa ilay mitaingina fa tsy ilay bisikileta no mahatonga ny fahasamihafana lehibe indrindra. Karakarao fotsiny izay anananao ary tazomy madio, tazomy tsara, ary ho ara-drariny, raha mahita vokatra tsara tsy tapaka ianao dia misy olona manome anao bisikileta maimaimpoana ihany koa .- Manaraka izany dia manana an'io fanontaniana io avy amin'i Dani isika ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany, @bobo_wyoming. 'Nanao fanadihadiana biomekanika aho' ary nilaza izy fa tena mandaka mafy, 'saingy efa ela no nanaovako azy.' Ahoana no hanatsarako azy? 'Eny, Dani, misaotra betsaka anao nifandray taminay.
Nanamboatra teknika nandritra ny taona maro ianao satria nitaingina bisikileta fotsiny ary nanomboka nitaingina fiara nefa tsy niahiahy momba ny fomba mitaingina azy, ary rehefa mieritreritra an'izany ianao, raha misy zavatra mety, indrindra ny bisikileta, nahoana ianao no tokony hiova? , Mahagaga ny mampifanaraka ny vatan'olombelona ary na inona na inona toerana misy olona mitaingina bisikileta, na dia amin'ny toerana biomekanika diso aza dia mety hahomby tokoa izy io, saingy mbola afaka manatsara sy mbola miova ihany. Mazava ho azy fa tsy teo aho, tsy mila milaza mazava tsara momba ny hamafin'ny fivezivezinao ianao na raha diso toerana ianao. Fa ny tena zava-dehibe, raha nisy fanovana napetraka taminao, dia alao antoka fa ataonao miandalana izy ireo ary rehefa mandeha ny fotoana.
Aza manao fiovana mihetsika lehibe na tampoka satria mety hitarika lohalika ratsy na ho lamosina ratsy ohatra. Fa mety hanjary hahomby kokoa ianao. Ankehitriny manokana amin'ny resaka teknika fanodinana nique, ny tianao hatao dia ny mieritreritra ny fomba fitondra-tongotra rehefa eo amin'ny bisikileta.
Eritrereto ny hozatra tadiavinao ary, amin'ny farany, mieritreritra ny hiditra amin'ny kapoka pedal milamina sy mandeha. Misy antsipiriany bebe kokoa eto. Misy i Dan, misy mandehandeha manaraka ny morontsirak'i California.
Jereo ity. Manantena aho fa hanampy izany. - Voalohany indrindra, hihemotra kely ihany isika.
Nasehonay manokana fa ny fisintomana ny pedal, ny fikikisana ny faritra ambany amin'ny tadin'ny pedal, dia tsy mahomby kokoa amin'ny fametahana pedal anao. - Ankehitriny ny vatanao dia hamindra ny herinaratra amin'ny pedal amin'ny fomba mahomby indrindra. Aza adino ny mandeha an-tongotra boribory - Araka ny efa nampanantenaina dia nandeha nilanja afo haingana kokoa aho.
Manantena aho fa tsy amin'ny fomba famaliako ireo fanontaniana intsony. Sivy monja no eto amiko ka manangona entana be aho. Voalohany, ity dia avy amin'i Olly Cook ao amin'ilay tsikera izay nanontany hoe: 'Aiza no alehan'ireo mpamily rehefa milavo lefona izy ireo?' Mila mipetraka ao anaty fiara fotsiny ve ianao hatramin'ny farany? 'Heveriko fa mahay mamaly ianao. 'Somary saro-kenatra ihany Olly, saingy tsia, marina ny anao.
Hipetraka ao anaty fiaran'ny ekipa izy ireo, fa rehefa feno ny fiaran'ny ekipa dia hipetraka matetika kokoa amin'ny kalesin'ny kifafa izy ireo, izay fiara farany amin'ny hazakazaka. Efa in-droa tao amin'ny sarety kifafa aho no nahatsapa fa somary kivy. Saingy ny zavatra hataonao dia ny misarika ny sisin'ny arabe, ny mpitantana ny hazakazaka dia esorinao ny nomeraonao ary avy eo dia mila mipetraka ao anaty fiara ianao na miditra amin'ny fiara farany an'ny hazakazaka.
Manaraka izany dia avy amin'i Kevin Gunaman, izay nanontany hoe: 'Rehefa manodina bisikileta', ara-dalàna ve ny handohalehan'ny lohalinao kely 'sa tokony ho mahitsy' miakatra sy mihetsika 'ny hetsika? Kevin, samy hafa ny fomba nananganana biomekanika antsika rehetra, taolana. Noho izany, raha vao mandeha bisikileta ianao ary manomboka manody, dia tsy azonao atao intsony ny misoroka izay mitranga amin'ny làlana alehan'ny lohalinao. Maro aminareo no mety nahatsikaritra fa ny lohaliko, indrindra ny lohaliko havia, raha ny marina dia mahatsikaiky ao anatiny.
Ka manana lohalika toy izao aho ary ny lohalika iray kosa manao an'io. Voajanahary daholo izany, voajanahary aho fa heveriko fa vokatry ny iray tamin'ny fianjerako io, saingy azonao ovaina kely fotsiny ilay izy. Rehefa mandeha any amin'ny mekanika bisikileta ianao, dia tena afaka manisy mpanasa lamba roa amin'ny kiraronao mba hanandramany sy hanamboarany zavatra.
pataloha fohy bisikileta
Saingy tena ara-dalàna izany. Misy ny olona manitatra ny lohaliny, misy ny olona manitatra ny lohaliny, ary misy ny olona tsara vintana manana karazana fanarahan-dia tonga lafatra. Eny ary, manaraka dia i Paul Graham's. 'Fa maninona no izy? Rehefa manafana ny ekipa, 'efa nahazo zavatra tamin'ny tanany ve izy ireo?' Inona izany ary inona no fiantraikany amin'ny vatana? mafana.
Amin'ny ankapobeny, mba hanafanana anao mandritra ny fotoana fitsapana dia misy zavatra antsoina hoe turbine, izay zavatra mipetaka eo an-tampon'ny oronao ary manokatra ny lalan-drivotrao hanampiana anao miaina tsara kokoa. Indraindray ianao dia mampiasa azy amin'ny fitsapana fotoana. Ny sasany kosa manampy azy ireo hanafana fotsiny hanatsarana ny volon'ondry landihazo ao anaty orony ary amin'ny ankapobeny dia manana karazana menthol toy ny Vicks na zavatra hafa izy ireo.
Ary izany dia manampy amin'ny fanadiovana ireo lalan-drivotra. Na dia tsy misy porofo ara-tsiansa tena izy aza dia manatsara ny zava-drehetra. na eo aza izany, mpamily maro no mampiasa azy.
Angamba misy effet placebo kely. Avy eo dia ananantsika izany avy amin'i Gunks Hunter: 'Ahoana no nahazoan'i Matt ny tompon-daka nasionaly?' Sprint, miato kely, tianay ianao Mat. Smiley emoticon. 'Tsara izany, misaotra anao Gunks.
Eny, nandresy tamin'ny tompon-daka nasionaly tamin'ny fialan-tsasatra irery aho, ka nanam-potoana hipetrahana sy hankafizako io fotoana io, saingy eny, fialan-tsasatra irery. Manaraka izany dia ny an'i Owen Jones. 'Salama ry havana, manana torohevitra momba ny fitondrana fiara ve' miaraka amin'ireo namana somary miadana ianao? ' Ankoatry ny tombo-tsoa mazava ho azy ireo dia 'manintona ny ankamaroan'ny familiana anao' izy ireo. Misaotra tamin'ny lahatsoratra tsara rehetra. 'Misaotra Owen.
Fanontaniana tena tsara izany. mitaingina namana miadana aloha ary indrindra raha manana bisikileta maivana izy ireo, angamba manandrama bisikileta mavesatra kokoa, mitaingina bisikileta miaraka amin'ny fender, mazava ho azy mipetraka eo aloha be kokoa. Ny iray hafa dia mety amin'ny fametrahana andiana kodiarana mavesatra na kodiarana mitazona.
Na, raha manana bisikileta safidinao ianao ary milaza fa ny namanao mitaingina bisikileta maivana maivana, ohatra, maninona ary? mandehana amin'ny bisikiletanao an-tendrombohitra, miaraka amina kodiarana mitazona mafy. Ny bisikileta mavesatra kokoa, ny hery misintona kokoa, vao mainka manasarotra azy kely. Avy eo dia avy amin'i Brad King, izay manontany d'Nahoana no antsoina hoe pedal tsy misy tsindry ireo pedal clipped? 'Talohan'izay, ny rafitra pedal izay ampiasainao dia pedal fisaka miaraka amina tranom-borona sy fehin-tongotra mifatotra.
Ary tena antsoina hoe clip sy fehy izy ireo. Saingy izao, tsy manana clip sy tadiny izahay, fa rafitra mifehy ny ski fotsiny. Misy orinasa antsoina hoe Look izay nampiditra an'ity rafitra ity tamin'ny tapaky ny taona 1980.
Noho izany, satria tsy misy clip, dia antsoina hoe 'clipless' izy ireo. Manaraka izany dia manana izany isika avy amin'ny Minjin025. 'Tsy mpihazakazaka aho, mpiady amin'ny faran'ny herinandro fotsiny' fa mety ve ny mihazakazaka fantsona efa nopetahana? 'Entiko eo anelanelan'ny 115 sy 120 psi' izy ireo ary milanja 185 kilao, '84 kilao ho an'ireo olona metrika adala. ' Misaotra betsaka!' Tsara izany fanontaniana izany.
Saingy rehefa nanomboka aho ary tsy notohanana, dia tsy maintsy nividy ny fitaovako rehetra aho, nopetahako be ny fantsonako. Mieritreritra aho fa misy fantsona mihazakazaka ao anaty flush izay misy karazana patetika na enina enina, fa raha mbola tsy misy fahasimbana lehibe ao anaty fantsona r dia karazana puncture kely izy io ary voahidy tsara izy ireo, maka ianao ny safidinao Fotoana, tsy misy olana mihitsy. Farany ity dia avy amin'i Adhidev Mukherjee, izay manontany tena hoe 'Inona no maharatsy ny tariby ivelany' amin'ny bisikileta hazakazaka avo lenta? 'Tokony hisakana sy hampiasa vola amin'ny kodiarana tariby ao an-trano ve ny olona iray, indrindra ho an'ireo vao manomboka? 'Fanontaniana tena tsara tokoa io, fa ny toro-hevitra ho ahy dia ny tariby no ampandehanana any ivelany.
Eny ary, ny lafy ambany, ny kely ambany, dia ny tsy fahombiazan'ny aerodynamika toy ny bisikileta lafo vidy kokoa misy tariby mandeha anatiny. Fa ny tombony azo amin'ny tariby mihodina ao anatiny dia ny fitahirizan'izy ireo mora kokoa. Noho izany, ho an'ny bisikileta fidirana dia manangona vola kely ary mifidiana tariby mandeha ivelany fa tsy.
Ary raha ny marina dia manana iray hafa avy any Indulonman eto aho amin'ny farany. 'Iza ilay vehivavy nilaza an'izany? Fotoana fohy hanaovana bisikileta fohy ve izao? 'Ny valin'io fanontaniana io dia, i Lizzie Deignan (mimonomonona), Tompondakan'ny làlana britanika ary tompon-daka eran'izao tontolo izao taloha ary medaly volafotsy taloha tamin'ny Lalao Olaimpika. Eny, somary reraka aho taorian'ity tadivavatra haingana sy haingana ity.
Fa hiadana kokoa kosa isika. Fanontaniana iray hafa ihany, ary ity dia avy amin'i Manuel W. 'Hey GCN, avy any Netherlands aho' fa te-hampiofana ary afaka hiakatra. ' Ny olana izao dia fisaka be i Hollande. 'Ireo havoana lehibe indrindra ananantsika dia ny fidona haingana.' Inona no fomba tsara indrindra hampiofanana ny fiakarana? 'Hashtag Torqueback' Eny, misaotra anao nifandray taminay, Manuel.
Fanontaniana maharitra iray avy amin'ireo izay mipetraka amin'ny faritra fisaka indrindra, fa alohan'ny handehanako lahatsoratra hizaha ity lohahevitra ity amin'ny lalina kokoa dia manana torohevitra vitsivitsy izay antenaiko hanampy. Raha izao, raha manana bisikileta fampihetseham-batana ianao ary nataoko izany taloha, andramo ny manao eo alohan'ny bisikileta fanatanjahan-tena mba hampiakatra ny bisikiletanao amin'ny zoro miakatra havoana Ovao ny zoro rehefa miakatra havoana ianao, na dia tsy mitovy aza ny kinetika dia tsy mitovy. Ary avy eo miezaha hipetraka ao amin'ny lasely, fa miaraka amina cadence ambany be kokoa, ary omeo tilikambo be dia be amin'ny alàlan'ny pedal.
Safidy io. manaova zavatra mitovy amin'izany dia apetaho eo alohan'ilay bisikileta fa ampiasao fitaovana lehibe dia lehibe ary mivoaha avy eo amin'ny lasely ary mitaingà elanelam-potoana iray minitra amin'ny fivoahana mafy avy eo amin'ny lasely araka izay tratranao amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana lehibe. Ary na dia tsy izany aza? tonga lafatra, hamerina endrika sasany miakatra izy.
Ary ny iray hafa dia ny hahatonga anao ho mpanazatra mahay ary Zwift izay saika mamerina mandehandeha tsara ny mitaingina any ivelany amin'ny fiakarana, fa amin'ny tontolo virtoaly. Araka ny efa nolazaiko teo aloha, eto ity lahatsoratra ity. (Mozika rock) - Safidy iray hafa ny manome fanoherana fanampiny eny an-dalambe.
famerenana banga 2018
Ankehitriny ianao dia afaka mitondra fiara miaraka amin'ny freins. Na dia tsy tena mamporisika izany aza izahay. Fa mety ho rivotra ihany koa.
Marina, rivotra. Na dia mahasosotra aza matetika, dia azo ampiasaina hanatsarana ny fiakarana. Ka raha mitondra fiara mandritra ny antsasak'adiny ianao dia hamoaka watts lehibe, hafainganam-pandeha somary miadana, toy ny fiakarana fangatahana GCNything, misaotra anao nifandray taminay.
Azafady mba apetraho hatrany ireo fanontaniana ireo amin'ny alàlan'ny tenifototra 'Torqueback' amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany na amin'ny media sosialy. Ary raha mbola tsy nisoratra anarana tamin'ny Global Cycling Network ianao dia maimaim-poana. Tsindrio izao tontolo izao ary tsy ho diso mihitsy ny lahatsoratra iray, Eny, ho an'ny lahatsoratra vitsivitsy hafa mifandraika amin'ny fiofanana momba ny fiakarana, tsindrio fotsiny eto ambany ho an'ny Safe Downhill Skiing, na indrindra ny Safe Downhill Skiing, na tsindrio eto raha hiakatra haingana kokoa amin'ireo havoana ianao nefa tsy mahomby lasa.
Mety misy lasa mpitaingina bisikileta mpomba azy ve?
Na dia ny tena tanjon'nybisikiletatokony hiala voly, ianaoafakamanohy asa amin'ny maha-bisikileta matihanina.Bisikileta matihaninamifaninana amin'ny hazakazaka toa ny Giro d'Italia, ny Tour de France, ary ireo hetsika hafa manerana an'izao tontolo izao hahitana hoe izahazakazaka am-bisikiletaary ekipa izaafakamanaova fotoana haingana indrindra.
Ohatrinona ny karaman'ny mpitaingina bisikileta?
Ny refin'ny karama
HO AN'NYmpitaingina kaontinantamanaona aiza na aiza manomboka amin'ny $ 26,200 ka hatramin'ny $ 171,200. Raha afaka miala an'io teboka io ny mpitaingina, na izany aza, mahazo tombony bebe kokoa ny fandoavana. Ny tanjona farany ho an'nybisikileta maro, na izany aza, diamanaoizany mankany amin'ny UCI World Tour, izay ny karama farany ambany dia $ 2.35M.29.06.2020
Ny fanontaniana napetrakay tamin'ny mpomba azy androany maraina dia hoe firy ny bisikiletany? (Mozika Uptempo) Firy ny bisikiletanao ary anananao ao an-trano? - Firy no ao amin'ny ekipa? Manana an-trano aho, ka manana iray, hoy aho eo anelanelan'ny bisikileta enina sy valo eran'izao tontolo izao .- Firy ny bisikiletanao ao an-trano? (mihomehy) - Be loatra angamba manodidina ny 10 na 11 - Be loatra satria somary tezitra amiko ny vadiko. Tsy maintsy mamindra ny bisikileta amin'ny zoro iray mankany amin'ny iray hafa aho, saingy eny, mitazona bisikileta isaky ny vanim-potoana aho dia pro ary eny, eny, ho be dia be izao - oh, tokony ho be izany bisikileta, fa mifandraika amin'ny bisikilety an-tendrombohitra na bisikileta gravel na bisikileta pub, manana be dia be ve ianao? - Eny, manana bisikileta an-tendrombohitra, bisikileta bisikileta, bisikileta amin'ny hazakaza-tsoavaly aho, eny, vonona ny hanao zavatra aho - eny, toa sahala amin'ny bebe kokoa noho ny fanosehana bisikileta hatrany amin'ny zoro izany.
Toa mila trano fanatobiana entana izany. - (mihomehy) Ie, mila lakaly ambanin'ny tany lehibe kokoa aho, izany ho an'ny ure. - Firy ny bisikiletanao amin'ny fitambarany? - Ry lehilahy.
Iray izany, fanontaniana tena henjana izany. Miaraka amin'ny bisikileta mihazakazaka eto, amin'ny hazakazaka, ao an-trano, bisikileta cruiser tsy haiko, dimy na enina, fa fantatrao. Heveriko fa ny fampitahana dia n plus iray foana.
N dia bisikileta fantatrao Ka tsy afaka hanana bisikileta ampy mihitsy ianao - (manainga) Manana Giant avy amin'ny HTC aho, manana Scott avy amin'ny HTC aho, manana bisikileta an-tendrombohitra Canyon aho tamin'ny 2011, Omega Pharma-Lotto, manana ridley roa aho, izaho manana Pally, iray vita tanana, vita amin'ny fanao namboarina avy any Amerika. Manana Vespa aho. (buzzer) Raha misy bisikileta ao.
Izaho koa manana moto (buzzer) sy bisikileta matavy. Ny bisikiletako voalohany, ny GT, ny telozoro telozoro mahazatra raha tadidinao. Ie - Modely inona izany? - Izy io dia, izany, a, oh, tianao holazaina.
Heveriko fa GT01 io. Tena antitra izy io, toy ny tamin'ny taona 2000. No. 1999.- Eny, tsy manana bisikilety betsaka aho, saingy manana vitsivitsy.
Amin'izao fotoana izao, ny tanjoko roa dia ny fananako fahazarana Cannondale, bisikileta an-tendrombohitra tsara. Mitaingina azy tsara aho. Heveriko fa izany no iray amin'ireo antony nanatsarako be dia be teny amin'ny fidinana.
Taorian'ny Tour de Suisse dia nanana razambe tena ratsy aho ary nanapa-kevitra ny hanatsara ny fahaizako ka nividy fahazarana ary nanomboka niasa tamin'ny fahaizako bisikileta an-tendrombohitra. Ary manana Slate Cannondale koa aho, izay toy ny antsy Swiss Army amin'ny bisikileta. Azonao atao ny mitaingina azy na aiza na aiza.- Eny.- Ka ireto no bisikileta roa ananako.- Tsy dia be loatra.
ahoana ny fanisana makrô
Bisikileta telo na efatra fotsiny. - Zavatra iray ihany no ananako. Dia izay. - bisikileta iray fotsiny? - Eny, manana ny tenako novidiko tamin'ny volako aho - Ka amin'ny fitambarany miaraka amin'ireo bisikileta azonao amin'ny ekipa? - Telo.- Mihoatra ny 10 no eritreretiko. (mihomehy) - Tsy dia maro loatra, satria an'ny bisikileta ny ekipa. (mihomehy) Fa bisikileta enina na fito angamba no ao an-trano amin'izao fotoana izao, ao anatin'izany ny bisikileta an-tanàna, bisikileta an-tendrombohitra, sns. - anao manokana? Manana zavatra betsaka kokoa noho ny ahy aho.
Fantatrao, mamela antsika mitazona bisikileta betsaka ny ekipa. Fa eny manana aho. Mbola manana toerana any amin'ireo fanjakana any Asheville, North Carolina izahay.
Mihevitra aho fa eo anelanelan'ny vadiko dia mety manana bisikileta 10 na 12 any, ary avy eo angamba sivy hafa any Girona - bisikileta ekipa rehetra sa manana bisikileta pub ianao? - Manana karazana isan-karazany aho, toy ny bisikileta matavy, bisikileta E, bisikileta gravelte cross, eny. Bisikileta misy bisikileta samy hafa, bisikilety an-tendrombohitra, ka eny, izaho dia mpanangona kely - Manana bisikileta pub ve ianao? - Tsia, tsia, fa manana iray izay mety ho bisikileta pub aho. Manana ny bisikiletako taloha aho, ny bisikiletako voalohany, BT.- Oh, cool.- Ary mety handratra kely izany amin'izao fotoana izao, fa firy ny bisikiletanao? Ha! Tsy te hilaza aminao aho hoe firy ny bisikiletako ato an-trano, satria misy vitsivitsy, fa ny zava-dehibe indrindra dia ny kodiarana aero record.
Mbola manana an'izany aho. Io sy ny bisikilako an-tendrombohitra no hany bisikiletako izay tompoko. Ny ambiny mazava ho azy fa bisikileta ekipa ary manana bisikileta fampiofanana TT sy bisikileta mahazatra aho.
Tsy maintsy nividy ny bisikiletanao aero ianao satria ny mpitaingin-tsoavaly dia mahazo ny bisikiletany amin'ny faran'ny taona matetika tsy nahazo izany, sa tsy izany? Azonao ve izany? - Tsia. Nahazo aho - Ankizilahy sambatra - Eny. Izy telo ireto.
Heveriko fa telo na efatra amin'ireo no natao. Ny iray namidy. Ny iray dia ao amin'ny foiben'ny Canyon.
fanazaran-tena ho an'ny fihetsika
Ny iray dia ao amin'ny tranombakoka Malvern Style. Ary ny iray miaraka amiko ato an-trano. - Iray amin'ireo nandiso fanantenana lehibe indrindra aho rehefa nitodika tany amin'ny Professional Finding fa tsy afaka nitandrina ny bisikiletako rehetra tamin'ny faran'ny taona, na dia nividy vitsivitsy aza.
Mahaliana ny mahita ny fahasamihafana misy eo amin'ny mpamily amin'izao fotoana izao, firy no tazomin'izy ireo ary firy no tsy izy. Adam Yates tsy misy bisikileta telo fotsiny amin'ny anarany. Marina, raha nankafizinao ity lahatsoratra ity, azafady mba omeo ankihibe eto ambany.
Ary raha te hahalala izay azon'ireto bisikileta atao ireto ianao raha tsy mpanao bisikileta matihanina dia tsindrio fotsiny eto ambany.
Tara loatra ve ny ho lasa mpitaingina bisikileta?
Fantatsika rehetra ny làlan'ny fihodinanaHO AN'NY: mpanao fanatanjahan-tena sy vehivavy manomboka tanora ny fanatanjahantena, manolo-tena tanteraka amin'ny faha-15 taonany, ary amin'ny faha-20 taonany, izay rehetra fantany ho olon-dehibe dia efaProfessionalatleta.08.22.2020
Mahazo olona maro manoratra aminay ao amin'ny GCN izahay ankehitriny ka niditra an-tsehatra tamin'ny fanatanjahantena izy ireo ary nanana fotoana hananana matihanina ka nieritreritra izahay fa hanontany ilay fitaovana fanoratana matihanina na androany hoe firy taona izy ireo vao nanomboka hazakazaka ary tsara toy inona izy ireo tamin'io hazakazaka voalohany io hoe firy taona ianao tamin'iza no nanao ny hazakazaka voalohany nataoko 11 taona inona ny vokany dia tamin'ny 92 no tamin'ny 11:30 no nitarihako nianjera nianjera tany anaty kirihitra niverina avy tonga aloha Heveriko fa 9 taona izany? dia ny vokatry ny ej lehibe voalohany dia 7 taona taty aoriana fa ny fampianarana dia ampahany tamin'ny taonako heveriko fa natao ho fahafinaretana fotsiny ny tontolo iainana tadidinao ve ny toerana nahavitanao tamin'ny hazakazaka voalohany nataonao fa nandresy aho tamin'ny hazakazaka tadiavinay ho ahy Te hanana ny fahafinaretana fotsiny fa tianao aho Te telo andro misesy no tadiaviko ary avy eo izany ilay antsoiko hoe fanamby Heveriko fa 15 14 na 15 Tsy toy ny hazakazaka ofisialy hazakazaka iray fotsiny no nisy isa teo an-damosinao, nanana isa aho ny lamosiko yeah yeah yeah inona no vokany teo aho satria mieritreritra13 aho ary inona ny valin'ny azo antoka fa Ikein Sieger tadidiko satria kely kokoa noho ny ankehitriny aho, fa io alin'ny alina io dia 10 taona lasa izay mba fantatrareo fa ny raiko dia ady an-tendrombohitra ho an'ny mpomba ary tamin'ny ankapobeny dia nanomboka bisikileta an-tendrombohitra aho tamin'izaho 12 13 taona angamba ary tamin'ny 16 17 dia nankany Isis Adam aho, firy taona ianao no nitsara voalohany dia mieritreritra aho fa nankany amin'ny toeram-piantsonan'olona dimy zotram-piaramanidina ivelan'ny velodrome mba nandresy tamin'ny filalaovan'i Ben sy tovolahy roa hafa izay mbola mitondra fiara ihany izao toerana izao no toerana voalohany misy ahy eto Mallorca 2005 ary firy taona ianao 2005 20 taona 20 ny hazakazaka voalohany nataoko izay nandresy ny hazakazaka voalohany tany an-tanànako 90 90 90 90 firy taona ianao avy eo quanto anna manana lay folo taona ary firy taona ianao no nanao ny orana voalohany nandroanao tany an-tokotany voalohany fony aho 13 sy 28 minitra tao anatin'ny iray segondra, aiza izany no mametraka anao ao amin'ny sokajy misy ahy azafady fa izaho irery no zaza tadiaviko aloha tiako, eny fa afaka nilaza izy izany 15 yeah? rsold tao dia nanomboka kamo be aho raha oharina amin'ny bandy bandy hafa, inona ny vokanao? Heveriko fa nandresy ny Vandana antsika, tsia Tsy nilavo lefona aho hoe firy taona ianao tamin'izay nanao ny hazakazanao voalohany 18 Heveriko fa tiako ny vokatr'izany? kiraro ary tazomy ny vody afovoan'ny mydad izay nalaiko tao amin'ny trano fitehirizana fito taona fito taona tsy manam-petra faharoa teny amin'ny arabe amoron-dàlana amoron-dalana voalohany teo amin'ny làlana no eritreretiko fa tokony ho 12 13 eny somary taty aoriana Kenny sy ny houseyoung dia teo amin'ny BMX teo amin'ny trackbar aho tamin'ny hazakazaka an-dalambe heveriko fa mpilalao afovoany aho, firy taona ianao no nanao ny hazakazaka voalohany nataonao 15 taona ary inona no vokany tsy dia tsara loatra ka tsy ataoko tadidinao fa efa hitako io tsindry io mandraka ankehitriny? Tsy dia firy taona ianao raha nitondra ny hazakazaka voalohany enin-taona enin-taona ary inona no vokatr'ilay fahatelo an'i Kyle tamin'ny telo farany Eny firy taona ianao no nitondra ny hazakazanao voalohany oh heveriko fa 16 taona aho 15 dia 15 tokoa aho satria izaho fa diso ny sokajy nosoratako ka tsy fantatro ny vanim-potoana fifaninanana rehetra ka eny 15 taona aho mieritreritra fa inona no vokany hitako ny voalohany ho an'ny hazakazaka iray manontolo ary nieritreritra aho fa handeha mandresy ary avy eo ny faran'ny farany ho an'ny olon-drehetra nandalo ahy ary nieritreritra aho fa toa fandevenana ho an'ny mpangataka ity tamin'ny fanontaniana roa na roa mikasika ny fotoana nanombohan'izy ireo ny hazakazaka. Ka rehefa tonga any amin'ny 89-20 ianao dia hanomboka zavatra fotsiny, aza kivy satria mbola azonao atao ny mitondra azy any amin'ny sehatra matihanina raha mbola tsy nisoratra anarana amin'ny gcn ianao dia tsindrio izao tontolo izao raha tianao ny manontany ny tsara omeo eto ambany izy io ary raha te hahita olon-kafa ianao dia manana iray eto izahay dia angatahinay amin'izy ireo ny zavatra tsara indrindra sy ratsy indrindra ho mpandeha bisikileta mpomba azy Manana lahatsoratra ato ihany koa izahay izay manome torohevitra vitsivitsy ho an'ny bisikileta tanora
Amin'ny firy taona ny tampon'ny bisikileta?
Inona no nentin-drazanatampon-taonaisan-karazany ho an'ny matihaninampitaingina bisikilety? Toy ny amin'ny baolina kitra (baolina kitra ho an'ny amerikana), ny ankamaroan'ny mpilalaotendronyeo anelanelan'ny 26-31 taona (afa-tsy ny mpiandry tsatokazo izaytendronyamin'ny 30-35).
Tsara ve ny kilometatra 3 minitra amin'ny bisikileta?
Ny ora antonony mankanybisikiletanykilaometatradia telo ka hatramin'ny efatraminitra. 17 hatramin'ny 18mph no salan'isabisikiletahafainganam-pandehan'ny olona salamamitaingina bisikiletamiaraka amina kalitao mendrikabisikiletaamin'ny tany fisaka ary koa terrain.
Iza no bisikileta manankarena indrindra eto an-tany?
1. Peter Sagan 6 tapitrisa euro.
22 taona loatra ve vao ho lasa mpitaingina bisikileta?
Araka ny hitanao dia azo atao tokoalasa bisikileta matihaninaao amin'nyTAONAny22, ary raha ny marina dia tsy dia fahita firy akory izany raha mihevitra ny olona hitodika isikaProfessionaltaorian'ny hazakazaka amatiran'ny taona maro.
Inona no fitsipika 75 amin'ny bisikileta?
ny75-percenterfitsipikamilaza fa mandritra ny herinandro fampiofanana nomena, farafaharatsiny75ny isan-jaton'ny kilometatrao (na ny fotoana) dia tokony ho eo ambany na ambany75isan-jaton'ny tahan'ny fitempon'ny fonao (MHR).
Ireo izay nandeha bisikileta matetika dia nilaza fa miasaho ela velona kokoa. ireo izay nampiasa ny bisikileta ho fitaterana miasa dia niaina taham-pahafatesana ambany kokoa na dia taorian'ny fanitsiana ny fanaovana asa ara-batana aza Ireo izayTsytsy ny tsingerina hiasa dia niaina taham-pahafatesana 39% ambony noho ireo izayTsy.
Maharitra hafiriana vao lasa bisikileta matihanina?
Ny fiofanana ho an'ny bisikileta pro matetika dia maharitra 4 ka hatramin'ny 6 ora isan'andro, na dia mety misy fotoana aza ao amin'ny gym manao lanja sy manatanjaka hery.
Afaka mahazo vola amin'ny bisikileta matihanina ve ianao?
Sarotra ny mitady vola amin'ny maha-mpitaingina bisikileta anao, saingy misy olona mahavita manao izany mandritra ny fotoana fohy. Matetika ny ekipa pro dia mandoa vola fotsiny ho an'ny fitaovana sy ny dia. Na ny karama ho an'ny hazakazaka lehibe aza tena ambany. Misafidiana asa malefaka hiasa amin'ny fiofanana sy ny fandaharam-potoanan'ny hazakazakao.
Ianao ve mila mpanohana mba ho bisikileta matihanina?
Na dia matetika aza ny mpanohana dia tsy manome vola be amin'ny ligy mpankafy toy ny ataon'izy ireo amin'ny bisikileta matihanina, ny fananana mpamatsy vola dia afaka manatsara ny vidin'ny fitaovana, fiofanana ary ny dia. Sarotra ny manao azy, fa mendrika ny hanandrana ny hitovizany ihany.